ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးချစ်သူ ဟုတ်၊ မဟုတ် တွက်နည်း – Trend.com.mm
ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးချစ်သူ ဟုတ်၊ မဟုတ် တွက်နည်း
သင်ဟာ သင့်ချစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံး ချစ်သူ ဟုတ်၊ မဟုတ် သိချင်ပါသလား။ နည်းလမ်းလေးကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။ သင်ဟာ သင့်ချစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးချစ်သူ ဟုတ်၊ မဟုတ်ဆိုတာ ဒီတွက်နည်းလေးနဲ့ အဖြေရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးက သင်သိချင်တဲ့ အဖြေပါပဲ။
ဥပမာ – သင်က 13.1.1991… သင့်ချစ်သူက 4.4.1990 ဆိုပါစို့။
4+1+8+1=14 > 1+4=5 အဖြေက5ပေါ့
1 ရတဲ့သူကတော့ သင်ဟာသူ့ကိုအသက်ပေးနိုင်လောက်အောင်ကိုချစ်ပေမဲ့
သူ့အတွက်ကတော့ ရည်းစားဟောင်းကပစ်သွားလို့ အသဲကွဲပြီး ခဏတာလာနားတဲ့ bus ကားမှတ်တိုင်လို ဖြစ်နေတာပါ။
သင်နဲ့အတူနေတဲ့အချိန်မှာသူဟာပျော်ရွှင်နေရပေမယ့် အဲဒီပျော်ရွှင်ခြင်းကဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပွေရှုပ်တတ်တဲ့သူ့အကျင့်က သင့်ထက်သာမယ့်သူကို အမြဲတမ်းရှာဖွေနေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းဟာမျောက်တစ်ကောင်သစ်ပင်ပေါ်ကပြုတ်ကျတာနဲ့အတူတူလိုဖြစ်နေတာပါ။ နောင် bus
ကားအသစ်ဟာ သူ့ဆီဆိုက်ကပ်လာခဲ့ရင် သူတစ်ခါတည်းပြေးတက်သွားဖို့ဝန်ေ လးမှာမဟုတ်သလိုသင့်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကျန်ခဲ့မှာလဲဆိုပြီးခေါင်းပြန်စောင်းငဲ့ဖို့တောင်အချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။
2 ရတဲ့သူကတော့ သင်နဲ့သူဟာချစ်တော့ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မုန်းတီးမှုနဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ချစ်ခြင်းဖြစ်တယ် တူတူနေခဲ့ရင်လည်းလက်ဝှေ့ပွဲကိုကြည့်နေရသလို နေ့စဉ်ထသတ်မှာအမှန်ပါပဲ။ အကျင့်တွေကလည်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး တစ်ယောက်ပြင်းလာရင် ကျန်တဲ့တစ်ယောက်ကလည်းအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါတောင်မှသင်တို့မှာသုံးပွင့်ဆိုင်မရှိသေးဘူးနော်။ တစ်နေ့ကျရင် သူက ခဏဝေးဝေးလောက်နေကြည့်ကြရအောင်လို့ပြောလာခဲ့ရင် သင် သူ့ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါ။ သူကသင့်ကိုမချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်နားလည်နိုင် တဲ့အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ထားပေးလိုက်ကြပေါ့နော်။
3 ရတဲ့သူက WoW! နောက်ဆုံးတော့လည်းသင်က အစစ်အမှန်ကိုတွေ့တာပဲလေ။
သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဟာ ရေစက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီနေတာပဲ။ အကျင့် အကြိုက် ညစ်ပတ်ခြင်း ပေါခြင်း အရူးထခြင်း တွေပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်ဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်ကြည့်နေရသလိုပဲ။
သင်တို့အချစ်ဟာဘာအရသာမှမရှိပေမယ့် ခိုင်မြဲမှုရှိတာတော့အမှန်ပဲလေ။
ကြည့်လိုက်တာနဲ့နှလုံးသားထိမြင် ရတယ်ဆိုတာပေါ့ ။ အဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။
သင်သတိထားရမှာက ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပဲ။ သင့်အတွက်သူဟာ ငြီးငွေ့စရာကောင်းနေတယ်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အချစ်တွေကိုရှာဖွေနေတယ်။
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘယ်လူမှ သင့်ရဲ့အခုအရသာမရှိတဲ့ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လူထက်ပိုပြီး
4 ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဟာ စေးကပ်ကပ်ကြီးလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုခွာခွာ
ခွာလို့မရတဲ့ပုံစံ ဘ၀ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမှန်းမသိတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနေတယ်။
သူလည်းသင့်အကျင့်တွေဟာသူနဲ့ပေါင်းစပ်လို့ရမလားဆိုတာကိုမသေချာသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ သင်ကလည်း အိနြေ္ဒရှင်ပီသစွာနဲ့ သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ဖွင့်ပြောဖို့ မရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့်ဟိုဖက်ကိုလည်းမသွား ဒီဖက်ကိုလည်းမရောက်ဖြစ်နေတာပေါ့။
အကောင်းဆုံးကတော့သင်တို့နှစ်ယော က် ခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးပြသနာကိုတူတူဖြေရှင်းကြတာကအကောင်းဆုံးပဲလေ။ မဟုတ်ရင်တော့ သင်တို့ထဲကတစ်ယောက်မဟုတ်တစ်ယောက်ဟာအသစ်တွေ့ ပြီး သင်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကဇာတ်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်နော်။
5 ရတဲ့သူက သင်နဲ့သူ့ရဲ့အချစ်က သွေးရဲရဲသံရဲရဲအချစ်ပေါ့။ ဘာဂိုဏ်းညာဂိုဏ်းတွေ မာဖီးယားဂိုဏ်းတွေလိုက်ရင်းအသက်လုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချစ်စစ်။
သင်တို့အချစ်လမ်းကြောင်းမှာဘယ်လောက်ပဲအန္တရာယ်ရှိပေမယ့် သင်တို့ဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုနားလည်ပြီး နှလုံးသားအစစ်အမှန်နဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်။သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ခုချိန်မှာချစ်သူအဆင့်တွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။နှစ်လွာပေါင်းမှတစ်ရွက်ဆို ပြီး ဖြစ်နေကြပါပြီ။ အသက်ပေးပြီးချစ်ကြတဲ့သူတွေအဆင့် ရောက်နေကြပါပြီ။
6 ရတဲ့သူက ခုချိန်တွေမှာ ဘာစားစား သကြားထည့်ဖို့တောင်မလိုတော့ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်တို့အချစ်ရဲ့ချိုမြိန်ခြင်းကသကြားရဲ့အချိုဓါတ်ကိုတောင်ဝါးမြိုသွားလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းဒီပျော်ရွင်မှုဟာ မပြည့်စုံသေးဘူးလို့သင်ခံစားရမယ်။ ရေမြောင်းပုပ်မှာလရိပ်ကို မြင်ရသလိုပေါ့။ သင်ဟာ သင့်ချစ်သူနဲ့ဒီလိုအမှတ်တရအချိန်လေးတွေကိုဘယ် လောက်ကြာကြာခံစားရဦးမှာလဲဆိုတာမသေချာသေးဘူး။
သို့ပေမယ့်လည်းသင်ဟာခုချိန်မှာအ ရမ်းပျော်နေတယ်လို့တော့ ပြောနိုင်တယ်လေ။
အကယ်လို့သူပြသနာတစ်ခုခုရှိ ပြီး သင့်ကိုမသိစေချင်ရင်လည်း သင်ကဘာမှမသိသလိုနေမှာအသေအချာပဲ။
သင်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ပြီလားလို့မေးရရင်တော့သင့်ရဲ့အစွမ်းအစပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူရဲ့ခိုင်မာမှုနဲ့လည်းဆိုင်တယ်လေ။သူ့ရဲ့ပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရဲ့ လားဆိုတာ….
7 ရတဲ့သူက ဒီတစ်ယောက်ကသင့်ကိုအမြင်ရှင်းသွားအောင်လုပ် ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။
အနိမ့်စားလူတစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
အဲဒီသူနဲ့အတူပါလာတာက တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စိတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးမှု
အများကြီး အများကြီးပေါ့ ။သင့်ကိုတစ်ခုခုကူညီလိုက်ရင်
ကျေးဇူးအတင်ခံချင်တာကအရင် ပေါ့။ ကျေးဇူးမမေ့နဲ့ ကျေးဇူးမမေ့နဲ့
ဆိုတာသူ့ပါးစပ်ကပြောလာတဲ့စကားတွေပေါ့။ ပွေလည်းပွေတယ်။ ကပ်စေးလည်းနှဲတယ်။
ဆိုးသောအရသာမျိုးစုံနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူပေါ့ ။
သင်ဟာ ရုပ်မရှိရင်အဲဒီတစ်ယောက်ကသင့်ကိုမျက်စောင်း လေးတောင်ထိုးကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့သင်မသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အတွဲပေါင်းများစွာကိုလည်း
ဂိုဒေါင်ကြီးထဲထည့်ထားရတဲ့ အထိ။ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ခွင့်က တော့ လုံးဝမမျှော်လင့်နေပါနဲ့တော့နော်။
8 ရတဲ့သူက သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချစ်ဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးဟာ 50% – 50% ပါပဲ။
တစ်ယောက်အကြောင်းကိုတစ်ယောက်သိေ နပြီလေ။ ဒါကြောင့်တူတူနေတဲ့အချိန်ဆို
စိတ်ချမ်းသာရတယ်။ အဲဒီစိတ်ချမ်းသာတာက ချိုတာတွေ၊ ro
တာတွေ၊ မရှိတဲ့ခံစားချက်၊ သ၀န်တိုခြင်၊းလိုချင်တပ်မက်မှုတွေမရှိတဲ့အချစ် ဖြစ်နေပါတယ် ဒါကြောင့်သင်တို့အချစ်ကသကြားပြတ်သွားတဲ့အချစ်နဲ့တူတယ်ေ လ။
သင်တို့နှစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိကြမှာပါ။
တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ဘယ်လောက် နားလည်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆို တာ ။သူ့အပြင်
သင့်အပေါ်မှာနောက်ထပ်နားလည်နိုင် မယ့်သူလည်းရှာလို့တွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။
9 ရတဲ့သူက … သင်တို့အချစ်ကို နှိုင်းရရင်တော့
နံနက်နေထွက်ချိန်နဲ့ ညနေ နေ၀င်ချိန် … ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီး …
သူချမ်းသာနဲ့ သူဆင်းရဲ …နတ်ပန်းနဲ့ ငရဲပန်း … စတာတွေပေါ့။
ဒါကြောင့်သင်တို့အချစ်ကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်တောင်နားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေရတယ်။ နောက်ထပ်
ဘာထူးဆန်းစရာတွေ ထပ်လာဦးမလဲဆိုပြီးတော့ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့
အချစ်အကြောင်းဟာ ဟာသတစ်ပုဒ်လိုပဲဖြစ်နေတယ်။ သင်တို့နှစ်ဦးကလည်းသိနေတယ် လေ။
ကြာရှည်လက်တွဲလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့။ခဏတစ်ဖြုတ်လေးလက်တွဲတာကလည်းကိုယ့်ဘ၀မှာရယ်စရာအမှတ်တရအဖြစ်ထားခဲ့ချင်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ သင်တို့နှစ်ဦးဟာ
အလွန်ခြားနားလွန်းလို့ တူတူသွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့။
သင်တို့နှစ်ဦးလမ်းခွဲသွားခဲ့ရင် လည်းသူငယ်ချင်းကောင်းတွေဆက်ဖြစ်ဦးမှာပါ။
သငျဟာ သငျ့ခဈြသူရဲ့ နောကျဆုံး ခဈြသူ ဟုတျ၊ မဟုတျ သိခငျြပါသလား။ နညျးလမျးလေးကတော့ လှယျလှယျလေးပါ။ သငျဟာ သငျ့ခဈြသူရဲ့ နောကျဆုံးခဈြသူ ဟုတျ၊ မဟုတျဆိုတာ ဒီတှကျနညျးလေးနဲ့ အဖွရှောကွညျ့နိုငျပါတယျ။
နောကျဆုံးရလာတဲ့ကိနျးတဈလုံးက သငျသိခငျြတဲ့ အဖွပေါပဲ။
ဥပမာ – သငျက 13.1.1991… သငျ့ခဈြသူက 4.4.1990 ဆိုပါစို့။
4+1+8+1=14 > 1+4=5 အဖွကေ5ပေါ့
1 ရတဲ့သူကတော့ သငျဟာသူ့ကိုအသကျပေးနိုငျလောကျအောငျကိုခဈြပမေဲ့
သူ့အတှကျကတော့ ရညျးစားဟောငျးကပဈသှားလို့ အသဲကှဲပွီး ခဏတာလာနားတဲ့ bus ကားမှတျတိုငျလို ဖွဈနတောပါ။
သငျနဲ့အတူနတေဲ့အခြိနျမှာသူဟာပြျောရှငျနရေပမေယျ့ အဲဒီပြျောရှငျခွငျးကဟိုမရောကျဒီမရောကျနဲ့ဖွဈနတေတျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ပှရှေုပျတတျတဲ့သူ့အကငျြ့က သငျ့ထကျသာမယျ့သူကို အမွဲတမျးရှာဖှနေလေို့ပဲဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြဖွဈဖို့အခှငျ့အလမျးဟာမြောကျတဈကောငျသဈပငျပျေါကပွုတျကတြာနဲ့အတူတူလိုဖွဈနတောပါ။ နောငျ bus
ကားအသဈဟာ သူ့ဆီဆိုကျကပျလာခဲ့ရငျ သူတဈခါတညျးပွေးတကျသှားဖို့ဝနျေ လးမှာမဟုတျသလိုသငျ့ကိုဘယျလိုဖွဈပွီးကနျြခဲ့မှာလဲဆိုပွီးခေါငျးပွနျစောငျးငဲ့ဖို့တောငျအခြိနျရှိမှာမဟုတျဘူး။
2 ရတဲ့သူကတော့ သငျနဲ့သူဟာခဈြတော့ခဈြကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့မုနျးတီးမှုနဲ့ပေါကျဖှားလာတဲ့ခဈြခွငျးဖွဈတယျ တူတူနခေဲ့ရငျလညျးလကျဝှပှေဲ့ကိုကွညျ့နရေသလို နစေ့ဉျထသတျမှာအမှနျပါပဲ။ အကငျြ့တှကေလညျးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျမတူကွပါဘူး တဈယောကျပွငျးလာရငျ ကနျြတဲ့တဈယောကျကလညျးအလြှော့ပေးမှာမဟုတျဘူး။ ဒါတောငျမှသငျတို့မှာသုံးပှငျ့ဆိုငျမရှိသေးဘူးနျော။ တဈနကေ့ရြငျ သူက ခဏဝေးဝေးလောကျနကွေညျ့ကွရအောငျလို့ပွောလာခဲ့ရငျ သငျ သူ့ကိုနားလညျပေးလိုကျပါ။ သူကသငျ့ကိုမခဈြတာမဟုတျပါဘူး။ တဈယောကျကိုတဈယောကျနားလညျနိုငျ တဲ့အခြိနျတဈခုလောကျတော့ထားပေးလိုကျကွပေါ့နျော။
3 ရတဲ့သူက WoW! နောကျဆုံးတော့လညျးသငျက အစဈအမှနျကိုတှတေ့ာပဲလေ။
သငျတို့နှဈယောကျရဲ့တှဆေုံ့ခွငျးဟာ ရစေကျလို့ချေါလို့ရတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈတူညီနတောပဲ။ အကငျြ့ အကွိုကျ ညဈပတျခွငျး ပေါခွငျး အရူးထခွငျး တှပေေါ့။ဒါကွောငျ့သူ့ကိုတှတေဲ့အခြိနျဆိုကိုယျ့ကိုယျကိုမှနျကွညျ့နရေသလိုပဲ။
သငျတို့အခဈြဟာဘာအရသာမှမရှိပမေယျ့ ခိုငျမွဲမှုရှိတာတော့အမှနျပဲလေ။
ကွညျ့လိုကျတာနဲ့နှလုံးသားထိမွငျ ရတယျဆိုတာပေါ့ ။ အဲ့ တဈခုတော့ရှိတယျ။
သငျသတိထားရမှာက ကိုယျ့စိတျကိုယျပဲ။ သငျ့အတှကျသူဟာ ငွီးငှစေ့ရာကောငျးနတေယျ။
ဒါကွောငျ့သငျဟာ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့အခဈြတှကေိုရှာဖှနေတေယျ။
နောကျဆုံးတော့လညျး ဘယျလူမှ သငျ့ရဲ့အခုအရသာမရှိတဲ့ပေါ့ရှတျရှတျလူထကျပိုပွီး
4 ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခဈြဟာ စေးကပျကပျကွီးလိုဖွဈနတေယျ။ ဘယျလိုခှာခှာ
သူလညျးသငျ့အကငျြ့တှဟောသူနဲ့ပေါငျးစပျလို့ရမလားဆိုတာကိုမသခြောသေးဘူးဖွဈနတေယျ။ သငျကလညျး အိန်ဒွရှေငျပီသစှာနဲ့ သူ့ကိုခဈြတယျလို့ဖှငျ့ပွောဖို့ မရဲဘူးဖွဈနတေယျ။
ဒါကွောငျ့ဟိုဖကျကိုလညျးမသှား ဒီဖကျကိုလညျးမရောကျဖွဈနတောပေါ့။
အကောငျးဆုံးကတော့သငျတို့နှဈယော ကျ ခေါငျးခငျြးဆိုငျပွီးပွသနာကိုတူတူဖွရှေငျးကွတာကအကောငျးဆုံးပဲလေ။ မဟုတျရငျတော့ သငျတို့ထဲကတဈယောကျမဟုတျတဈယောကျဟာအသဈတှပွေီ့း သငျတို့ရဲ့ဇာတျလမျးလေးကဇာတျသိမျးသှားလိမျ့မယျနျော။
5 ရတဲ့သူက သငျနဲ့သူ့ရဲ့အခဈြက သှေးရဲရဲသံရဲရဲအခဈြပေါ့။ ဘာဂိုဏျးညာဂိုဏျးတှေ မာဖီးယားဂိုဏျးတှလေိုကျရငျးအသကျလုပွီး ဖွဈပျေါလာတဲ့အခဈြစဈ။
သငျတို့အခဈြလမျးကွောငျးမှာဘယျလောကျပဲအန်တရာယျရှိပမေယျ့ သငျတို့ဟာတဈယောကျနဲ့တဈယောကျကိုနားလညျပွီး နှလုံးသားအစဈအမှနျနဲ့ခဈြတာဖွဈတယျ။သငျတို့နှဈယောကျဟာ ခုခြိနျမှာခဈြသူအဆငျ့တှမေဟုတျတော့ပါဘူး။နှဈလှာပေါငျးမှတဈရှကျဆို ပွီး ဖွဈနကွေပါပွီ။ အသကျပေးပွီးခဈြကွတဲ့သူတှအေဆငျ့ ရောကျနကွေပါပွီ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာယုံကွညျနပေါပွီ သငျဟာ ဘုရားကပေးလာတဲ့
6 ရတဲ့သူက ခုခြိနျတှမှော ဘာစားစား သကွားထညျ့ဖို့တောငျမလိုတော့ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သငျတို့အခဈြရဲ့ခြိုမွိနျခွငျးကသကွားရဲ့အခြိုဓါတျကိုတောငျဝါးမွိုသှားလို့ဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျးဒီပြျောရှငျမှုဟာ မပွညျ့စုံသေးဘူးလို့သငျခံစားရမယျ။ ရမွေောငျးပုပျမှာလရိပျကို မွငျရသလိုပေါ့။ သငျဟာ သငျ့ခဈြသူနဲ့ဒီလိုအမှတျတရအခြိနျလေးတှကေိုဘယျ လောကျကွာကွာခံစားရဦးမှာလဲဆိုတာမသခြောသေးဘူး။
သို့ပမေယျ့လညျးသငျဟာခုခြိနျမှာအ ရမျးပြျောနတေယျလို့တော့ ပွောနိုငျတယျလေ။
အကယျလို့သူပွသနာတဈခုခုရှိ ပွီး သငျ့ကိုမသိစခေငျြရငျလညျး သငျကဘာမှမသိသလိုနမှောအသအေခြာပဲ။
သငျဟာသူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြဖွဈပွီလားလို့မေးရရငျတော့သငျ့ရဲ့အစှမျးအစပျေါမှာမူတညျပါတယျ။ ပွီးတော့သူရဲ့ခိုငျမာမှုနဲ့လညျးဆိုငျတယျလေ။သူ့ရဲ့ပွသနာကိုဖွရှေငျးနိုငျရဲ့ လားဆိုတာ….
7 ရတဲ့သူက ဒီတဈယောကျကသငျ့ကိုအမွငျရှငျးသှားအောငျလုပျ ပေးနိုငျစှမျးရှိတယျ။
အနိမျ့စားလူတဈယောကျကဘယျလိုလဲဆိုတာပေါ့။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့
အဲဒီသူနဲ့အတူပါလာတာက တဈကိုယျကောငျးဆနျစိတျ ကိုယျ့ကိုယျကိုအထငျကွီးမှု
အမြားကွီး အမြားကွီးပေါ့ ။သငျ့ကိုတဈခုခုကူညီလိုကျရငျ
ကြေးဇူးအတငျခံခငျြတာကအရငျ ပေါ့။ ကြေးဇူးမမနေဲ့ ကြေးဇူးမမနေဲ့
ဆိုတာသူ့ပါးစပျကပွောလာတဲ့စကားတှေပေါ့။ ပှလေညျးပှတေယျ။ ကပျစေးလညျးနှဲတယျ။
ဆိုးသောအရသာမြိုးစုံနဲ့ပွညျ့နတေဲ့သူပေါ့ ။
သငျဟာ ရုပျမရှိရငျအဲဒီတဈယောကျကသငျ့ကိုမကျြစောငျး လေးတောငျထိုးကွညျ့မှာမဟုတျဘူး။ ပွီးတော့သငျမသိသေးတဲ့ သူ့ရဲ့အတှဲပေါငျးမြားစှာကိုလညျး
ဂိုဒေါငျကွီးထဲထညျ့ထားရတဲ့ အထိ။ ဒါကွောငျ့သူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြဖွဈခှငျ့က တော့ လုံးဝမမြှျောလငျ့နပေါနဲ့တော့နျော။
8 ရတဲ့သူက သူ့ရဲ့နောကျဆုံးအခဈြဖွဈဖို့အခှငျ့အရေးဟာ 50% – 50% ပါပဲ။
တဈယောကျအကွောငျးကိုတဈယောကျသိေ နပွီလေ။ ဒါကွောငျ့တူတူနတေဲ့အခြိနျဆို
စိတျခမျြးသာရတယျ။ အဲဒီစိတျခမျြးသာတာက ခြိုတာတှေ၊ ro
တာတှေ၊ မရှိတဲ့ခံစားခကျြ၊ သဝနျတိုခွငျ၊းလိုခငျြတပျမကျမှုတှမေရှိတဲ့အခဈြ ဖွဈနပေါတယျ ဒါကွောငျ့သငျတို့အခဈြကသကွားပွတျသှားတဲ့အခဈြနဲ့တူတယျေ လ။
သငျတို့နှဈယောကျဟာ တဈယောကျကိုတဈယောကျသိကွမှာပါ။
တဈယောကျအပျေါတဈယောကျဘယျလောကျ နားလညျနိုငျစှမျးရှိတယျဆို တာ ။သူ့အပွငျ
သငျ့အပျေါမှာနောကျထပျနားလညျနိုငျ မယျ့သူလညျးရှာလို့တှတေ့ော့မှာမဟုတျတော့ဘူးလေ။
9 ရတဲ့သူက … သငျတို့အခဈြကို နှိုငျးရရငျတော့
နံနကျနထှေကျခြိနျနဲ့ ညနေ နဝေငျခြိနျ … ကောငျးကငျနဲ့မွကွေီး …
သူခမျြးသာနဲ့ သူဆငျးရဲ …နတျပနျးနဲ့ ငရဲပနျး … စတာတှပေေါ့။
ဒါကွောငျ့သငျတို့အခဈြကိုသငျတို့ကိုယျတိုငျတောငျနားမလညျနိုငျပဲဖွဈနရေတယျ။ နောကျထပျ
ဘာထူးဆနျးစရာတှေ ထပျလာဦးမလဲဆိုပွီးတော့ သငျတို့နှဈယောကျရဲ့
အခဈြအကွောငျးဟာ ဟာသတဈပုဒျလိုပဲဖွဈနတေယျ။ သငျတို့နှဈဦးကလညျးသိနတေယျ လေ။
ကွာရှညျလကျတှဲလို့မရဘူးဆိုတာပေါ့ ။ခဏတဈဖွုတျလေးလကျတှဲတာကလညျးကိုယျ့ဘဝမှာရယျစရာအမှတျတရအဖွဈထားခဲ့ခငျြလို့ပဲဖွဈတယျ။ သငျတို့နှဈဦးဟာ
အလှနျခွားနားလှနျးလို့ တူတူသှားလို့မရဘူးဆိုပွီးတော့ပေါ့။
သငျတို့နှဈဦးလမျးခှဲသှားခဲ့ရငျ လညျးသူငယျခငျြးကောငျးတှဆေကျဖွဈဦးမှာပါ။